ငွေလဲနှုန်း MMK သို့ TRY, မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် တူရကီလိုင်ရာ, ပွောငျး
ငွေလဲနှုန်း MMK — TRY ပွောငျး မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် တူရကီလိုင်ရာ, ဂဏန်းတွက်စက်, ဘယ်လောက်အလိုတော်
0,01 TRY တူရကီလိုင်ရာ
ဒီငွေလဲနှုန်း MMK/TRY ရက်စွဲအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ 25.10.2020 00:59
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်များမှာ မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (MMK) и တူရကီလိုင်ရာ (TRY). အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါသည် 25.10.2020 00:59.
တူရကီလိုင်ရာ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို TRY) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် ကြက်ဆင်.
10 1 616,04
50 8 080,18
100 16 160,36
200 32 320,73
500 80 801,82
1000 161 603,64
2000 323 207,29
5000 808 018,22
10000 1 616 036,44
200003232 072,88
50000 8 080 182,19
ငွေကြေးက ISO code ကို TRY
အထိမ်းအမှတ် ₺ • £ • ₤ • TL • LT • YTL
အနု Kurush (1/100)
ဒင်္ဂါးပြား 1, 5, 10, 25, 50 Kurush, 1 TRY
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ 5, 10, 20, 50, 100, 200 TRY
နိဒါန်း၏တစ်နှစ်တာ 1923—1927 ခုနှစ်
ယခင်ငွေကြေး တူရကီ (အော်တိုမန်) Lira
ပူစီနံ တူရကီပြည်နယ် Mint,
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.0379 s.